Warmly Welcome: အတွေ့ချင်ဆုံး ၁၀ ယောက်
ဘာဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဆိုးတယ်.. လာမခေါ်နဲ့ ဒါပဲ။
ဒါမျိုးကျတော့ ကျွေးရမှာစိုးတာနဲ့ ပြောမပြဘူး။
ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ စာတွေ ရေးသားနိုင်ပါစေ
တို့ကိုမတွေ့ချင်လို့ .. ဆိုတာသိရလို့
၁၀ နဲ့ မြှောက်ပြီး ၁၀၀ ပြည့်အောင် ရေးလိုက်ရင်ပြီးရော...း)
တွေ့ချင်တဲ့ ၁၀ ယောက်ထဲမှာ အမ ပါတဲ့ အတွက်ပျော်စရာပါ၊ တို့မောင်နှမတွေ တနေ့နေ့ တွေ့မှာ ပါ
(တနေ့နေ့ကျရင် တွေ့ကြမယ်လို့ပြောချင်တာပါ) ဟီဟိ
အန်တီ့ကိုတော့ မတွေ့ချင်ဘူးပေါ့လေ... နေပေါ့ ...
မရဘူးအေ ... စိတ်ကွက်သွားပြီ. .....
ဟဲ ... စတာနော် .... တစ်နှစ်ပြည့်သွားတာတောင် မသိလိုက်ဘူး ... ဘလော့လောကကနေ ခဏအနားယူနေမိလို့ ....
မမ KOM ကိုတွေ့ချင်တဲ့သူတွေ များလာပြီ...
ကိုအောင်သာငယ် ပြောတာလည်း ဟုတ်သလိုလိုပဲ... ၁၀ ချင်းမြှောက်လိုက် ပီးရော.. :D
အကို ကကြီး ကတော့ ဆိုး ပြီ..။
ဒီလောက် နေ့ တိုင်းတွေ့ နေ တဲ့သူ ကိုတောင်တစ် နှစ် ပြည့် ဘာမှမလုပ်ပေးဘူး..။
နေပေါ့ ရပါတယ် သားကိုကျတော့ တွေ့ချင်ဘူးပေါ့ ဟွန်းးးးး စိတ်ကောက်တယ် သားလဲ ဦးဝယ်လ်ကမ်း ကြီးကို တွေ့ချင်တော့ဘူး ဟွန်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
အဟား အကိုရေ စတာ စိတ်ဆိုးနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ
ဟီးးးးးး စိတ်ဆိုးတယ်ပဲ ရဘူး သူများလည်းမိန်းကလေးပဲကိုတွေ့ချင်တဲ့အထဲ့ပါဘူး :P
တို့ အကို ကြီးတော့ လုပ်ပြီး
ကျား ကျားချင်းတွေ့ ချင်တရ်ဆို တိရိစ္ဆာရုံမှာ ကြည့်မယ်တဲ့
မမ တွေ နဲ့ တွေ့ ပေါ့
အင်းလေ အဲ့တာတော့ ဘက်လိုက်တာပေါ့ မောင်မျိုးတို့ကိုတော့ တွေ့ချင်လားမတွေ့ချင်လားမသိ အွန်လိုင်းမှာတောင် block ပေးခံထိသွားတယ် ကောင်းကော :P
ိကိုဝင်းဇော်ကြိးနော်။ အနော့ကျတော့ပါဘူး။ ငယ်လေးတယောက်ထဲတွေ့ ဘူးချင်တယ်။
ခုဖွင့်လို့ရပါပြီဗျာ။ သူ့ ဘလော့ကို။
စကားကို ပလ္လင်ခံထားတော့လည်း စိတ်မကွက်ပဲနေရတာပ :D
ကျွန်တော့်ကို ကြည့်မရနိုင်အောင် သိပ်မုန်းနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်း ပါပါတယ်။ <<< ဆိုတာ အဒူလဲဟင်
ကိုဝင်းဇော်ပြောတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ စာတစ်ကြောင်းနဲ့ Comment တစ်ရာကျော်ရတဲ့ မခင်ဦးမေကတော့ ပြောစမှတ်ပဲနော။
မတွေ့ချင်လည်းနေပါရပါတယ်။ တို့တွေက အကြီးတွေဖြစ်နေတော့ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဆိုးသွားတယ်ထင်ရင်လည်း ရန်ကုန်ပြန်လာမှ ထမင်းလိုက်ကျွေးပေါ့။ (ကိုဧရာက ရှမ်းစာ ကြိုက်ပါတယ်။)
ကိုဝင်းဇော် တွေ့ဖူးချင်တဲ့သူတွေကို ပုလဲလည်း တွေ့ဖူးချင်တယ် ဟီးးး
မောင်နှမတွေဆိုတော့ အကုန်လုံးကိုတော့ တွေ့ချင်သားဗျ နော့်း)
ဦးဦးဝင်းဇော်တွေ့ဖူးချင်တဲ့ ၁၀ ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ထား.. နောက်ကျရင် မက်မက်တို့ကိုလည်း ပြ... ဟိဟိ.. တချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်... မက်မက်တို့လည်း တွေ့ဖူးလို့ရတာပေါ့.. ခစ်ခစ်...
စီနီယာကြီး လာလာလည်တယ် ..
မျက်နှာလိုက်တယ်ပေါ့၊ တို့လဲတွေ့ဖူးချင်တယ်၊ အဲဒီထဲမှာ ကိုဝင်းဇော်မပါဘူး .. အဟဲ ဟဲ
မီးမီးကိုလည်း တွေ့ဖူးချင်တဲ့ သူထဲမပါလို့ စိတ်ကောက်တယ်။ တစ်နှစ်ပြည့်တာကိုလဲ ဘာမှ မကျွေးဘူး၊ ကိုဝင်းဇော်ကြီး များတော့ များနေပြီနော်. ကိုဝင်းဇော်တွေ့ဖူးချင်တဲ့ သူတွေထဲမှာ မီးမီးလည်း တွေ့ဖူးချင်တဲ့သူတွေ များတယ်။
မျက်နှာလိုက်တာတော့ မကောင်းဘူးဗျို့ ..
ဦး welcome ရဲ့ ရင်ထဲက ၁၀ ယောက်ကိုလာကြည့်သွားတယ် ..
တွေ့ဖူးချင်တယ် အားလုံးကို အဟဲ (ကျား) မပါဘူး၊
ကိုဝဲကုတ်ကြီး မလွန်ဘူးလား။ မြွေ..မြွေခြင်း
ခြေမြင်တယ်နော်...။ သွားလူဇိုး ရေလဲ မချိုးဘူး
ဟဟ.. ရယ်ချင်သွားတယ်.. မောင်ဝင်းဇော်ရေ..
မောင်ဝင်းဇော် အတွေ့ချင်ဆုံး ညီမလေး၊ ၁၀ ယောက်နဲ့
အပြင်မှာတွေ့ဆုံနိုင်ပါစေကွယ်... အဲ ..မမတစ်ယောက်ပါတယ်.း) မမKom
ဇယားချပြီး စဉ်းစားနေရတာ.း)
first lady လို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါ့မယ်
မေလည်း မကျေနပ်ဘူးနော် သိထားဖို့က။
များတော့များနေပြီ၊ လူတွေလည်း သိကုန်ပြီး..
အကြောင်းသိတွေဆိုတော့ ငါ့နာမည် မပါဘူးတော့ ဟုတ်လား။ တွေ့မယ်။ ကျပ်၂သတိထားပါ။
တနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်က ပြောတော့ ခဏလေးပေမယ့် ဖြတ်သန်းလာရတဲ့ အချိန်တွေကို လေးစားတယ်။
ရေးသားလာတဲ့ စာတွေ ပိုခိုင်မာလာတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ပျော်ပျော်ကြီး ဆက်ရေးသားနိုင် ပါစေဗျာ။
နှင်းဆီတို့နာမည်မပါလို့ ဘယ်လိုမှ စိတ်မချမ်းသာ နိုင်ဘူး (စတာနော်)
အယောက် ၁၀၀ ဆိုရင် ပါနိုင်မလားပဲ။
မေ့မထားပါနဲ့လို့ ပြောချင်တယ် (အဟဲ)
စာကြွေ်းတွေ လာဖတ်တယ်။ မကျေမနပ်နဲ့ပါ။
နောက်ဆို ဘီယာဘိုးမင်းပဲရှင်း တော့။
ရေးပေးမယ်နော်။ အခု မိရောင်တို့ သူများအကျိုးဆောင်နေရလို့။ ဟိဟိ
တစ်နှစ်ပြေည့်လည်း ဘာမှ မကျွေးဘူး။ အသိလည်း မပေးဘူး။ တွေ့ချင်တဲ့ အထဲမှာလည်းမေတို့ မပါဘူး။ စက်ရက်တယ်။ ဒါပဲပြောချင်တယ်။
မုန်းတဲ့သူကိုလဲ တွေ့ဖူးချင်သေးတယ် ဆိုတော့ ချစ်ခဲ့တုန်းက မတွေ့ခဲ့ရဘူးနဲ့ ထင်တယ်။ ငါမှန်းတာ မမှားရင်ပေါ့။ အွန်လိုင်း အချစ်၊ အွန်လိုင်းအချစ် ..